Xiisad ka dhalatay xil ka qaadistii madaxweynaha hirshabeelle oo ka taagan magaalada jowhar – Kismaayo24 News Agency
by Tifaftiraha K24 16th August 2017 039
Shirkii xil ka qaadis ayaa waxaa guddoomisey haweeneyda guddoomiye ku xigeenka ka ah baarlamaanka, iyada oo markii dambe uu ku raacay guddoomiyaha baarlamaanka oo isagu ka maqnaa kulankii codka kalsoonida lagu qaaday.
Cali Cabdullaahi Cosoble oo shir ku qabtay magaalada Jowhar ayaa sheegey in aysan jirin wax xil ah oo laga qaaday, isaga oo sharci darro ku tilmaamay kullankii baarlamaanka, wuxuuna soo bandhigey xildhibaano isaga taabacsan.
Xildhibaanada taabacsan Cosoble ayaa dhankooda sheegey in ay xilka ka qaadeen guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre Maxamed.
Balse baarlamaanka wuxuu horey kasii watay hawlihiisa, waxaana la dhaariyey madaxweyne ku xigeenka Guudlaawe in uu si kumeelgaar ah shaqada u wado, iyada oo sidoo kale maanta la sameeyey guddi 9 xubnood ka kooban oo la sheegey in ay yihiin guddi doorashada madaxweyne cusub.
Xiisaddan siyaasadeed oo aysan wali ka hadlin dowladda federaalka ayaa waxaa laakiin si weyn ugu kala qeybsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee laga soo doortey Hirshabeelle, kuwaasi oo shirar ku qabtay Muqdisho.
Image captionXildhibaan Maxamad Xasan Ibrahim (Qoonne)
Xildhibaan Maxamad Xasan Ibrahim oo loo yaqaano Qoone oo kamid ah baarlamanka federaalka oo ka soo jeeda deegaannada Hirshabeelle, oo la hadlay BBC-da ayaa yiri “Waxay ila tahay Soomaalida xeerar iyo sharciyo lagu shaqeeyo ayaa jira, cid kasta oo la doortey waa la ridi karaa, laakiin sidii lagu doortey waa in lagu ridaa, qof xanaaqay iyo koox gaar ah midna madaxweyne ma ridi karaan, ” Qoone oo intaasi ku daray in nidaamku uu yahay in mooshin la keeno baarlamaanka, kadibna laga doodo mooshinka, madaxweynuhu is difaaco, kadibna cod la galiyo mooshinka.
Image captionXiuldhibaan Daahir Amiin Jeesoow
Balse waxaa fikir kaasi kasoo horjeeda qaba xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow oo yiri “Anaga waxaan nahay xildhibaano, wixii sharciga waafaqsana waxaan ku qasbanahay in aan taageerno, xil ka qaadista madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble waxaan aaminsanahay in ay waafaqsantahay dastuurka Hirshabeelle iyo kan federaalka, guddoonkii baarlamaankana aysan ku kala qaybsanayn”.
DEG DEG:- Xildhibaan Katirsan Barlamaanka PL oo Muqdisho lagu dilay
DEG DEG: Alshabaab oo goordhaw shaacisay waqtiga rasmiga ah ee la soomi doono
Ciidanka Ammaanka Kenya oo sheegay in ay ka hortageen Weerar Alshabaab ay ku qaadi rabeen Nairobi